Mpanamboatra sy mpitrandraka asidra nokleika TGuide S32 tsara indrindra | Hongyu
Fomba amam-by vy ho an'ny fanadiovana asidra niokrika, vahaolana vaovao ho an'ny fitrandrahana asidra nokleika avo lenta sy haingana
TGuide S32 Automated Nucleic Acid Extractor dia mandray ny adsorption sy ny famindrana tsora-kazo farany indrindra. Ny takelaka misy lavadrano 96-lalina sy ireo karazana reagents fitrandrahana vakana andriamby dia ampiharina hamoahana sy hanadio ireo asidra niokrika avy amin'ny ra / sela / sela / sela / viriosy ary virus hafa. Ny fitaovana dia mampiasa ny tsorakazo andriamby manokana handraisana, hamindrana ary hamoaka vakana andriamby, mba hahatsapany ny famindrana vakana andriamby sy asidra niokleika.
Saka. tsy misy Haben'ny fonosana Vidiny
YOSE-S32 1set anontanio aloha
■ Ny maody hozatry ny tsora-kazo tsy manam-paharoa manana amplitude vibration lehibe sy avo lenta.
■ Maody vaovao mahery vaika adsorption, effets adsorption vakana andriamby tsara ary vokatra asidra nokleika avo.
■ Fero ny fiasan'ny fiarovana ny toerana, ny fiasan'ny fitaovana miadana sy milamina mba hisorohana ny tsy fahombiazana.
■ Windows Pad sy ny bokotra maodely fanaraha-maso indroa, asa fanovana programa mahery vaika, fandidiana tsotra, tsotra ary mety.
■ Ny rafitra fanaraha-maso marani-tsaina sy ny maodelim-panafody UV dia azo atao tsara ny misoroka ny fandotoan'ny hazo fijaliana eo anelanelan'ny lava-drano sy ny andiany.
■ Miantehitra amin'ny sehatra fitrandrahana asidra nokinika TIANGEN sy sehatra fanadiovana ny fanadiovana dia manome vahaolana automatique feno sy feno ary avo lenta.
Aorian'ny fakan'ny buffer lysis ny santionany, ny asidra nukôniika nesorina tamin'ny vahaolana lysis / mamatotra dia namboarin'ireo vakana andriamby manokana. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny tsorakazo andriamby sy ny sisin'ny tendrony andriamby, ny fanintonana andriamby, ny famindrana, ny famotsorana, ny fampifangaroana ary ny hetsika hafa dia vita mba hampisarahana ireo vakana andriamby manaparitaka ny asidra niokrika amin'ny vahaolana lysis / mamatotra. Ny loto isan-karazany izay tsy voafatotra manokana amin'ny vakana andriamby dia nesorina tao amin'ny lavadrano fanasan-damba, ary farany nolevonin'ny molekiola asidra nukôlika ao anaty lozisialy.
Fomba fivezivezena tsy manam-paharoa amin'ny tsoratry ny andriamby
Mampiasa maotera mpandeha ilay fitaovana mitondra fiara. Miaraka amin'ny amplitude hovitrovitra lehibe amin'ny tsorakazo andriamby, ny amplitude hovitrovitra dia ahitsy ho azy araka ny volan'ny vahaolana, hahazoana antoka fa fifangaroana tsara. Ny fitaovana fandefasana dia mampiasa visy baolina, miaraka amina fiasan'ny tsoratra magnetika, avo lenta ary fiainana maharitra. Ny faritra mihetsiketsika rehetra dia misy fiasa fiarovana ny toerana voafetra mba hiantohana ny fiasan'ny fitaovana milamina sy milamina mba hisorohana ny tsy fahombiazana.
Maody Adsorption matanjaka vaovao
Amin'ny alàlan'ny mode adsorption matanjaka vao noforonina, ny vakana andriamby dia voaravaka eo amin'ny tendron'ilay tsorakazo andriamby, ka eo ambanin'ny fatran'ny volavolan-tsolika kely, dia mbola afaka manarona vakana andriamby rehetra ny eluent. Ireo vakana andriamby dia misy vokany tsara amin'ny adsorption sy vokatra asidra nokleika avo.
Fomba fanaraha-maso indroa an'ny Windows Pad sy ny bokotra efijery
Miorina amin'ny fiasan'ny bokotra mahazatra dia voafehy lavitra amin'ny Windows Pad avo lenta izy io. Ny interface interaktif an'ny programa fampiharana Windows dia napetraka tanteraka, izay mifanaraka amin'ny asan'ny birao mahazatra ny mpanjifa ary mianatra ny fahazarana mampiasa Windows.
Torolàlana momba ny vokatra ho an'ny TGuide S32
Teo aloha: Kitapo ADN / RNA virtoaly virtoaly
Manaraka: TIANprep Kitapo plasmid haingana
Ny fitrandrahana ADN genomika amin'ny ra
Ohatra: 200 μl bevohoka EDTA anticoagulant feno ra. Ny ADN Genomika dia levona ao anaty buffer TB 100 μl. DNA Marker: TIANGEN MD110, D15000 DNA Marker
Fitrandrahana ADN / RNA Virus
Ny vava dia mamono ny fitrandrahana ADN genomika
Santionany: ny vava sampam-bava dia voafafa in-20 ao am-bava ary tehirizina ao anaty fantsona centrifuge misy buffet buffer GA 450 μl. Ny ADN Genomika dia levona tao amin'ny 60 μl Buffer TB.
Fanesorana asidra niokleary mandeha ho azy
Kitapo fitrandrahana asidra nokleika
Fanadiovana asidra niokleary
Kitapo fanadiovana asidra niokleary